Apple Bhadhara Cash yave kuwanikwa muUnited States | IPhone nhau
Apple yakaratidza Apple Pay Cash mune yekupedzisira WWDC 2017 payakatiratidza nhau dzeIOS 11, ndokuzvizivisa mukupera kwegore rino. Mushure mekuburitswa kwakagadziriswa kweIOS 11.2 Mugovera wapfuura wakamanikidzwa nedhigi ine iOS 11.1.2 iyo yakadzokororazve iyo iPhone, nhasi Apple peer-to-peer yekubhadhara sevhisi yaona mwenje wezuva.
Apple Bhadhara Cash inobvumidza kubhadhara pakati pevanhu vachishandisa iyo Apple Meseji kunyorera. Nenzira yakapusa sekushandisa mameseji application, tinogona kubhadhara pakati pevanhu mahara zvachose uye kuunganidza mari yacho pa iPhone yedu kana kuendesa kuakaundi yedu yekutarisa nenzira yakapusa. Asi parizvino Apple Kubhadhara Cash inongowanikwa muUnited States uye iwe unofanirwa kusangana nezvinotevera zvinodiwa kuti uishandise. Tinokupa iwe pazasi pazasi.
Chishandiso chinoenderana neApple Pay uye neIOS 11.2 kana gare gare
Maviri-chinhu chechokwadi chinogoneswa pane yako Apple account.
Chikwereti kana kiredhiti kadhi muWallet.
Parizvino, gara muUnited States kuti sarudzo iwanikwe muMameseji
Maitiro ese ekutumira nekutambira mari kuburikidza neApple Pay Cash iri nyore kwazvo, sezvo iwe uchiona muvhidhiyo iyo Apple pachayo yakaburitsa ichitiratidza matanho ese anofanirwa kutorwa kuita kudaro. Kana mari yatambirwa kekutanga, tichava nemazuva anomwe kuti tiibvume. Izvi zvinongoitika chete kekutanga patinozviita, ipapo mari inozoerekana yaenda ku "virtual kadhi" redu mukati medu iPhone iyo yatinogona kushandisa kubhadhara kuburikidza neApple Pay. Iko hakuna mhando yekomisheni, chete mune yekubhadhara nekadhi rechikwereti, inova 3% sezvazvinowanzoitika mune ese aya maitiro ekushanda. Tinogona chete kumirira kuti ipararire kunze kweUnited States.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple Bhadhara Cash yave kuwanikwa muUnited States
Sphero Mini, iyo tekinoroji yakamanikidzwa kusvika pakakwirira